CC Warsame: Waa in la badelo hoggaanka hay'adda NISA | KEYDMEDIA ONLINE
CC Warsame: Waa in la badelo hoggaanka hay’adda NISA
Fahad Yasin, oo xiriir dhow la leh dalka Qatar ayaa faragalin ku haya hanaanka doorashada Soomaaliya, isagoo si joogto ah ugu hanjaba guddiga doorashooyinka, sida uu sheegay hoggaamiyaha mucaaradka CC Warsame.
MUQDISHO, Soomaaliya - Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir ahna Musharrax Madaxweyne C/raxmaan C/shakuur Warsame, ayaa ku baaqay in xilka laga qaado Taliyaha Nabad-sugida iyo Sir-doonka Qaranka, Fahad Yasin Xaaji Daahir, kadib markii ay siyaadeen falal danbiyeedyada uu ay ku lug leedahay NISA.
CC Warsame ayaa sheegay in Fahad uu dambiyo badan ka galay dalka, oo ay ka mid tahay in kumanaan dhalinyaro Soomaali ah oo lagu tababaray Asmara la geeyay Tigray si ay uga garab dagaallamaan ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eretria ee duullaanka ku qaaday kooxda TPLF dhamaadki sanadkii hore.
Hogaamiyaha mucaaradka ayaa sheegay in Taliyaha NISA, uu si joogto ah ugu hanjabayo xubnaha guddiyada doorashada si uu u afduubto howlaha doorashada, isla-markaana uu Farmaajo uga caawiyo ku soo laabashada xaafiiska.
“Sida keli ah ee NISA lagu xakamayn karo waa in hoggaankeeda la bedelaa, loona dhiibaa shakhsi shaqada hay’ada ku ekaada. Waa tijaabo hortaala madaxbanaanida RW Rooble”. Ayuu yiri Warsame.
Hadalka hoggaamiyaha Wadajir ayaa imaanaya, kadib markii hoooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Qaali Maxamuud Guhaad, ay sheegtay in gabar ay dhashay oo lagu magacaabo Ikraan Tahliil Faarax, ay af-duubteen rag ka tirsan hoggaanka NISA.
Musharrax Warsame, wuxuu codkiisa ku biiriyay baaqyada isa soo taraya ee ah in la soo celiyo gabadha la waayey ee Ikran Tahil, isagoo ka codsaday RW Rooble, inuu sameeyo guddi madax bannaan oo kiiska baara.